ကျနော် အပျိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ မှားခဲ့တယ်။ ၀န်ခံပါတယ်... - APANNPYAY
Home / ရယ်စရာများ / ကျနော် အပျိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ မှားခဲ့တယ်။ ၀န်ခံပါတယ်...
ကျနော် အပျိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ မှားခဲ့တယ်။ ၀န်ခံပါတယ်...
Apann Pyay 9:39 PM ရယ်စရာများ Edit
--- * * * - - - * * * - - - * * * - - - * * * - - -
'' ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ အင်္ကျီတွေ ပုဆိုးတွေ ရွံ့ဗွက်တွေကိုပေလို့ ။ လမ်းမှာချော်လဲလာတာလား ။ အဲ့ဒါကြောင့် မိုးခြောက်မှအလည်လာပါလို့ မိချောကပြောတာ ''
မိချောမျက်နှာမှာ ပန်းနုရောင်ရှက်သွေးလေးတွေ ဖြာလျက်။
''လာအိမ်ထဲဝင် ၊အ်ိမ်မှာက ဘယ်သူမှမရှိကြဘူး ။မိချောနဲ့ ဒေါ်လေးပဲရှိကြတာ ။အဖေနဲ့အမေက ရန်ကုန်ကိုသွားကြတယ်။''
''ဒေါ်လေး နေကောင်းလား ။ ဒေါ်လေးဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီလေးက ဒေါ်လေးနဲ့ သိပ်လိုက်တာပဲ''
''ဒေါ်လေးက အ၀တ်အစားကအစ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တာကိုပဲရွေးဝတ်တာကွဲ့'' အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်ချွဲနွဲ့ပြောနေလိုက်တာ ကိုယ့်ရုပ်ကိုမှအားမနာ။မျက်နှာကကျောက်ပေါက်မာတွေ မပေါ်အောင်မိတ်ကပ်တွေအတုံးလိုက်အတစ်လိုက်ဖို့ထားပြီး အပြင်ထွက်ကျမတတ်ပြူးကျယ်လွန်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ပြုံးမပြဘဲပေါ်လွင်နေတဲ့ မလုံမခြုံအပေါ်သွားလေးချောင်းက မွဲခြောက်ခြောက်အသားအရေပေါ်မှာ ဖြူဖွေးခြင်းဂုဏ်ကိုဆောင်လျက်။
''အစ်ကို ခဏစောင့်။ အစ်ကိုစားဖို့ တစ်ခုခုကို အပြင်မှာသွားဝယ်လိုက်အုံးမယ်''
''နေပါစေ မိချော ။အစ်ကိုမဆာပါဘူး။ မှောင်လည်းမှောင်တော့မယ်ဆိုတော့ မိချောတစ်ယောက်တည်း အပြင်သွားမှာစိတ်မချဘူး''
''ရပါတယ် ၊ မိချောမှာဓာတ်မီးပါပါတယ်။ဆိုင်ကလည်း အရှေ့ဘက်နှစ်အိမ်ကျော်မှာပဲ''
''မောင်လေး လာထိုင်လေ ၊လက်ဖက်သုတ်စားပါအုံး''
''ခဏစောင့်အုံးမောင်လေး'' ပြာပြာသလဲ မီးဖိုချောင်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားလေ၏။
''ဒါ မိချောတို့အဖေ မမရဲ့အစ်ကိုကြီးသောက်တဲ့ ပုလင်း ''
''ရော့ ..မောင်လေး သောက်။ မမ ငှဲ့ပေးမယ် ''ပြောပြောဆိုဆို ခွက်ထဲငှဲ့၍ ကျနော့ဘက်သို့တိုးပေးလေသည်။
'' နေပါစေ ဒေါ်လေး..ကျနော်ကိုယ်တိုင်ငှဲ့ပါ့မယ် ''
''မမ လို့ခေါ်လည်းရပါတယ်ကွယ် ၊ ဒေါ်လေးလို့ခေါ်တာက မမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ သူစိမ်းဆန်နေသလားလို့'' ကနွဲ့ကလျ ပြောနေတဲ့သူ့ပုံစံကြီးက ရွံစရာကောင်းလွန်းလှသည်။
ကျနော်လည်း စိတ်ကျဉ်းကျပ်နေတာနဲ့ သူငှဲ့ပေးတဲ့ အရက်ခွက်တွေကို တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် သောက်ရင်း မိချောလေးပြန်အလာကိုသာ စောင့်မျှော်နေမိတယ်။ သူကတော့ အရက်ခွက်ကလေးငှဲ့ပေးလိုက် ကျနော့မျက်နှာကို ပြုံးကြည့်လိုက် လက်ဖက်ခွက်ကလေး တိုးပေးလိုက်နဲ့ ကြည်နူးနေလေရဲ့ ။ ကျနော့မှာတော့ သူ့ကိုအရွဲ့တိုက်သောက်ရင်း ဒီဂရီတွေမြင့်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေလေပြီ။
''မမ ကြောက်တယ် မောင်လေးရယ် '' ပြောရင်း ကျနော့ဘေးရောက်လာသည်။ ကျနော် အတော်ကိုအနေကျပ်သွားသည်။ သူ့ဆီက ရေမွှေးနံ့ပြင်းပြင်းတွေကြောင့် ကျနော်ပိုပြီးမူးချင်လာပြီ၊
မထူးတော့ပြီ ၊။ မူးချင်မူးပါစေတော့ ။စိတ်ကကျဉ်းကျပ်လွန်းနေပြီ။ စားပေါ်က ပုလင်းကို မှန်းဆွဲပြီး ကုန်ခမန်းလိလိ မော့ချလိုက်သည်။ ပြီး..စားပွဲပေါ် ပုလင်းကိုပြန်အတင်...
''ဂျိမ်း..ဂျိမ်း..ဂျိမ်းဂျမ်း.......''လျှပ်စီးများ လက်ခနဲဖြစ်သွားပြီး မိုးခြိမ်းသံကြားလေတော့
''မမကို ပြန်ဖက်ထားပါ မောင်လေးရယ် မမ ကြောက်လွန်းလို့ပါ''
''ဖယ်..ပေး..စမ်း..ပါ..ဗျာ ။ကျနော်..အရက်..သောက်..လို့..မပြီး..သေးဘူး''ကျနော့အသံတွေ ၀ါးတားတားနဲ့မသဲကွဲချင်တော့။မူးနေပြီကိုး။
''ပုလင်းကို မမ ယူပေးပါ့မယ်ကွယ်''
အိမ်ရှေ့ မှာ အော်ကြီးဟစ်ကြယ်နဲ့ ငိုသံကြားလို့ အိပ်ချင်မူးတူးဖြင့် လူးလဲထရင်း ပုဆိုးပြင်ဝတ်ပြီး အ်ိမ်အပြင်သို့ထွက်ကြည့် လိုက်မိသည်။ မနေ့ကသောက်ထားတဲ့အရှိန်ကြောင့် ခေါင်းထဲမှာမကြည်မလင်ပဲ။ ကလေးဆိုးကြီးတစ်ယောက်လို အော်ကြီးဟစ်ကြယ်ငိုနေတဲ့သူကို သေချာကြည့်လိုက်မှ
''ဟိုက်...အပျိုကြီး ဒေါ်ဂျမ်းစိန်ပါ့လား ''
မင်း ညတုန်းကလေ ..ညတုန်းက ..အဟီး.ဟီး''သူ့စကားသူမဆက်နိုင် ရှိုက်ကြီးတစ်ငင်ငိုပါလေရော။
''ပြောပြပါဗျာ ကျနော် ညတုန်းကဘာမှားခဲ့လို့လဲ''
''မှားတာပေါ့ ..မှားတယ်..မင်းသိပ်မှားတယ်.''သူ့အသံမှာ ဒေါသသံ မာနသံ ၀မ်းနည်းသံများရောနှောနေသည်။
''ကျနော် ဘယ်သူနဲ့မှားခဲ့တာလဲ ..ဟင်''
မချိုမချဉ်မျက်နှာပေးနဲ့မေးလိုက်တဲ့ ကျနော့အမေးကြောင့်ထင်သည်..မီးဝင်းဝင်းတောက်နေသော ဒေါသမျက်လုံးတစ်စုံဖြင့် ကျနော့ကိုစိုက်ကြည့်ရင်း...
ဟိုက်...အဲ့ဒါမှလွဲပြီ။ ကျနော့နဖူး မြွေပေါက်ပါပြီ ။ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး ။အရပ်ကတို့ရေ..ကျနော့ကိုကယ်ကြပါအုံး ။ ကျနော့ဘ၀ပျက်ပါပြီဗျ။ ဒီအပျိုကြီးကိုတော့ လက်မထပ်ပါရစေနဲ့ ။ ကျနော်လုံးဝမယုံဘူး..။ကျနော်မူးနေတာမှန်ပေမယ့် သူနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမှားနိုင်ဘူး..
''ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ...''မယုံသင်္ကာ နဲ့ ကျနော်မေးကြည့်လိုက်မိသည်။
သူလက်ညှိုးညွှန်ရာကြည့်လိုက်တော့ ကျနော့အိမ်လှေကားခြေရင်းမှ ဖိနပ်တစ်ရံ။ ဖိနပ်ရဲ့ပင်ကိုယ်အရောင်မမြင်ရလောက်အောင် ရွံ့ဗွက်တွေပေကျံလို့။ သေချာကြည့်လိုက်မှ ဖိနပ်တစ်ဖက်က ကျနော့ဖိနပ်ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်က သဲကြိုးပြတ်နေတဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ဖြစ်နေတယ်။
''အဲ့ဒါ ကိုသာဒင် ငါ့ကိုအမှတ်တရပေးခဲ့တာ။ ငါအမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်း။ ခုတော့ ပျက်စီးကုန်ပြီ။နင်ဘယ်လိုတာဝန်ယူမှာလဲ.ပြော'' ၀မ်းနည်းပက်လက်ဖြင့် နှမျောတမ်းတဖြစ်နေသော ဒေါ်ဂျမ်းစိန်မှာ တကယ်သနားစရာပင်။
''ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားကောင်း ဆိုတာ ကိုယ့်အမှားကို တာဝန်ယူရဲတဲ့သတ္တိအပြည့်ရှိရမှာပေါ့ ။ ကျနော် တာဝန်ယူပါ့မယ်။ လကုန်ရက် လစာထုတ်တဲ့နေ့ ဒီဖိနပ်ထက်ကောင်းတဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တစ်ရံ ဒေါ်လေးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရပါ့မယ်။''
ငှဲ....ငှဲ.....ဖတ်ရှုပေးတဲ့ သယ်ရင်းတွေကို ကျေးဇူး အထူးပါလို့.....
ကနြျော အပြိုကွီးတဈယောကျနဲ့ မှားခဲ့တယျ။ ဝနျခံပါတယျ
----- ***--- *** ---- *** ----
'' ဘယျလိုဖွဈတာလဲ အကငြ်္ီတှေ ပုဆိုးတှေ ရှံ့ဗှကျတှကေိုပလေို့ ။ လမျးမှာခြျောလဲလာတာလား ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ မိုးခွောကျမှအလညျလာပါလို့ မိခြောကပွောတာ ''
မိခြောမကျြနှာမှာ ပနျးနုရောငျရှကျသှေးလေးတှေ ဖွာလကျြ။
''လာအိမျထဲဝငျ ၊အျိမျမှာက ဘယျသူမှမရှိကွဘူး ။မိခြောနဲ့ ဒျေါလေးပဲရှိကွတာ ။အဖနေဲ့အမကေ ရနျကုနျကိုသှားကွတယျ။''
''ဒျေါလေး နကေောငျးလား ။ ဒျေါလေးဝတျထားတဲ့ အကငြ်္ီလေးက ဒျေါလေးနဲ့ သိပျလိုကျတာပဲ''
''ဒျေါလေးက အဝတျအစားကအစ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတာကိုပဲရှေးဝတျတာကှဲ့'' အသကျအရှယျနဲ့မလိုကျခြှဲနှဲ့ပွောနလေိုကျတာ ကိုယျ့ရုပျကိုမှအားမနာ။မကျြနှာကကြောကျပေါကျမာတှေ မပျေါအောငျမိတျကပျတှအေတုံးလိုကျအတဈလိုကျဖို့ထားပွီး အပွငျထှကျကမြတတျပွူးကယျြလှနျးတဲ့မကျြလုံးတှနေဲ့ ပွုံးမပွဘဲပျေါလှငျနတေဲ့ မလုံမခွုံအပျေါသှားလေးခြောငျးက မှဲခွောကျခွောကျအသားအရပေျေါမှာ ဖွူဖှေးခွငျးဂုဏျကိုဆောငျလကျြ။
''အဈကို ခဏစောငျ့။ အဈကိုစားဖို့ တဈခုခုကို အပွငျမှာသှားဝယျလိုကျအုံးမယျ''
ခေါငျးထဲမှာ နောကျကြိကြိရီဝဝေအေရှိနျက ခုထိစှဲထငျနသေညျ။ ဩျော ..မိခြောလေးရယျ ဒီအိမျကွီးထဲမှာ ဟိုအပြိုကွီးနဲ့နှဈယောကျတညျး မငျးမို့ထားခဲ့ရကျတယျကှာ။
''ခဏစောငျ့အုံးမောငျလေး'' ပွာပွာသလဲ မီးဖိုခြောငျခနျးထဲသို့ဝငျသှားလေ၏။
''ရော့ ..မောငျလေး သောကျ။ မမ ငှဲ့ပေးမယျ ''ပွောပွောဆိုဆို ခှကျထဲငှဲ့၍ ကနြော့ဘကျသို့တိုးပေးလသေညျ။
''မမ လို့ချေါလညျးရပါတယျကှယျ ၊ ဒျေါလေးလို့ချေါတာက မမတို့နှဈယောကျကွားမှာ သူစိမျးဆနျနသေလားလို့'' ကနှဲ့ကလြ ပွောနတေဲ့သူ့ပုံစံကွီးက ရှံစရာကောငျးလှနျးလှသညျ။
ကနြျောလညျး စိတျကဉျြးကပျြနတောနဲ့ သူငှဲ့ပေးတဲ့ အရကျခှကျတှကေို တဈခှကျပွီးတဈခှကျ သောကျရငျး မိခြောလေးပွနျအလာကိုသာ စောငျ့မြှျောနမေိတယျ။ သူကတော့ အရကျခှကျကလေးငှဲ့ပေးလိုကျ ကနြော့မကျြနှာကို ပွုံးကွညျ့လိုကျ လကျဖကျခှကျကလေး တိုးပေးလိုကျနဲ့ ကွညျနူးနလေရေဲ့ ။ ကနြော့မှာတော့ သူ့ကိုအရှဲ့တိုကျသောကျရငျး ဒီဂရီတှမွေငျ့ခငျြသလိုလိုဖွဈနလေပွေီ။
''မမ ကွောကျတယျ မောငျလေးရယျ '' ပွောရငျး ကနြော့ဘေးရောကျလာသညျ။ ကနြျော အတျောကိုအနကေပျြသှားသညျ။ သူ့ဆီက ရမှေေးနံ့ပွငျးပွငျးတှကွေောငျ့ ကနြျောပိုပွီးမူးခငျြလာပွီ၊
မထူးတော့ပွီ ၊။ မူးခငျြမူးပါစတေော့ ။စိတျကကဉျြးကပျြလှနျးနပွေီ။ စားပျေါက ပုလငျးကို မှနျးဆှဲပွီး ကုနျခမနျးလိလိ မော့ခလြိုကျသညျ။ ပွီး..စားပှဲပျေါ ပုလငျးကိုပွနျအတငျ...
''ဂြိမျး..ဂြိမျး..ဂြိမျးဂမျြး.......''လြှပျစီးမြား လကျခနဲဖွဈသှားပွီး မိုးခွိမျးသံကွားလတေော့
''ဖယျ..ပေး..စမျး..ပါ..ဗြာ ။ကနြျော..အရကျ..သောကျ..လို့..မပွီး..သေးဘူး''ကနြော့အသံတှေ ၀ါးတားတားနဲ့မသဲကှဲခငျြတော့။မူးနပွေီကိုး။
''ပုလငျးကို မမ ယူပေးပါ့မယျကှယျ''
အိမျရှေ့ မှာ အျောကွီးဟဈကွယျနဲ့ ငိုသံကွားလို့ အိပျခငျြမူးတူးဖွငျ့ လူးလဲထရငျး ပုဆိုးပွငျဝတျပွီး အျိမျအပွငျသို့ထှကျကွညျ့ လိုကျမိသညျ။ မနကေ့သောကျထားတဲ့အရှိနျကွောငျ့ ခေါငျးထဲမှာမကွညျမလငျပဲ။ ကလေးဆိုးကွီးတဈယောကျလို အျောကွီးဟဈကွယျငိုနတေဲ့သူကို သခြောကွညျ့လိုကျမှ
မငျး ညတုနျးကလေ ..ညတုနျးက ..အဟီး.ဟီး''သူ့စကားသူမဆကျနိုငျ ရှိုကျကွီးတဈငငျငိုပါလရေော။
''ပွောပွပါဗြာ ကနြျော ညတုနျးကဘာမှားခဲ့လို့လဲ''
''မှားတာပေါ့ ..မှားတယျ..မငျးသိပျမှားတယျ.''သူ့အသံမှာ ဒေါသသံ မာနသံ ဝမျးနညျးသံမြားရောနှောနသေညျ။
''ကနြျော ဘယျသူနဲ့မှားခဲ့တာလဲ ..ဟငျ''
မခြိုမခဉျြမကျြနှာပေးနဲ့မေးလိုကျတဲ့ ကနြော့အမေးကွောငျ့ထငျသညျ..မီးဝငျးဝငျးတောကျနသေော ဒေါသမကျြလုံးတဈစုံဖွငျ့ ကနြော့ကိုစိုကျကွညျ့ရငျး...
ဟိုကျ...အဲ့ဒါမှလှဲပွီ။ ကနြော့နဖူး မွှပေေါကျပါပွီ ။ဒါမဖွဈနိုငျဘူး လုံးဝမဖွဈနိုငျဘူး ။အရပျကတို့ရေ..ကနြော့ကိုကယျကွပါအုံး ။ ကနြော့ဘဝပကျြပါပွီဗြ။ ဒီအပြိုကွီးကိုတော့ လကျမထပျပါရစနေဲ့ ။ ကနြျောလုံးဝမယုံဘူး..။ကနြျောမူးနတောမှနျပမေယျ့ သူနဲ့တော့ဘယျနညျးနဲ့မှမမှားနိုငျဘူး..
သူလကျညှိုးညှနျရာကွညျ့လိုကျတော့ ကနြော့အိမျလှကေားခွရေငျးမှ ဖိနပျတဈရံ။ ဖိနပျရဲ့ပငျကိုယျအရောငျမမွငျရလောကျအောငျ ရှံ့ဗှကျတှပေကြေံလို့။ သခြောကွညျ့လိုကျမှ ဖိနပျတဈဖကျက ကနြော့ဖိနပျဖွဈပွီး ကနျြတဈဖကျက သဲကွိုးပွတျနတေဲ့ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျဖွဈနတေယျ။
''အဲ့ဒါ ကိုသာဒငျ ငါ့ကိုအမှတျတရပေးခဲ့တာ။ ငါအမွတျတနိုးတနျဖိုးထားခဲ့တဲ့ပစ်စညျး။ ခုတော့ ပကျြစီးကုနျပွီ။နငျဘယျလိုတာဝနျယူမှာလဲ.ပွော'' ဝမျးနညျးပကျလကျဖွငျ့ နှမြောတမျးတဖွဈနသေော ဒျေါဂမျြးစိနျမှာ တကယျသနားစရာပငျ။
''ဟုတျကဲ့ယောကျြားကောငျး ဆိုတာ ကိုယျ့အမှားကို တာဝနျယူရဲတဲ့သတ်တိအပွညျ့ရှိရမှာပေါ့ ။ ကနြျော တာဝနျယူပါ့မယျ။ လကုနျရကျ လစာထုတျတဲ့နေ့ ဒီဖိနပျထကျကောငျးတဲ့ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျတဈရံ ဒျေါလေးအတှကျအဆငျသငျ့ဖွဈစရေပါ့မယျ။''
ငှဲ....ငှဲ.....ဖတျရှုပေးတဲ့ သယျရငျးတှကေို ကြေးဇူး အထူးပါလို့.....